Nepal Galleries: 2016
चिनियाँ सांस्कृतिक सम्बृद्ध बन्दै : नेपालमा विध्वंस मच्चाउँदै !!
By Maheswor Maharjan at December 30, 2016 No comments:
किर्तिपुर - दे पुखु
By Maheswor Maharjan at December 29, 2016 No comments:
Labels: किर्तिपुर, दे पुखु
उहिलेको Water ATM
उहिलेको वाटर एटिएम (Water ATM)
By Maheswor Maharjan at November 30, 2016 No comments:
Labels: Water ATM, ढुंगेधारा, पँधेरो
मे दिवसको सन्दर्भ
सन १८८६ को मे १ को दिनदेखि शिकागोको एक मेलामा दैनिक ८ घण्टा मजदुरीको माग लिएर एक सामान्य बिरोध कार्यक्रम चल्दैथ्यो । मे ४ को दिन प्रहरीले हस्तक्षेप गरेर प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्न थाले । एक अपरिचित ब्यक्तिले प्रहरीलाई साथ दिंदै भिडमा बम फ्याँके । हेर्दाहेर्दै शान्त प्रदर्शन युद्धभुमिमा परिवर्तन भए । सयौं नागरिकहरु मारिए, कैयौं घाइते भए । ८ प्रहरीको ज्यान गए, ६० प्रहरीको घाइते भए । सयौं श्रमिक नेताहरु र समर्थकहरुलाइ झरपक्कड गरिए र ४ जनालाई झुण्ड्याइए । मे ५ को दिन स्थानिय सरकारको मिलिसियाले भिडमाथि गोली बर्साउन थाले र ७ प्रदर्शनकारी मारिए । कुखुरालाई दाना खुवाउँदै गरेका किसान पनि मारिए । एक स्कुले बालक पनि मारिए ।
यश घटनाको ३ बर्षपछि पेरिसमा भएको कंग्रेसको एक मिटिङमा यस घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनको रुपमा उठाए । लगतै १८९० मा भएको दोस्रो मिटिङ्ममा पनि निरन्तरता पाए र १८९१ मा यसले एक बार्षिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनको रुपमा औपचारिकता पाए । International Socialists Congress Amsterdam 1904 ले सबै देशका समाजवादी प्रजातान्त्रिक पार्टी, संगठन, युनियनहरुलाई मे १ को दिन ८ घण्टा दैनिक कामको लागि बैधानिक रुपमै विश्वब्यापी प्रदर्शन गर्न आह्वान गरे । कंग्रेसले मे १ को दिन कसैले पनि काम नगर्ने र विश्वब्यापी रुपमा शक्तिशाली प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरे ।
यता प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र अनि गणतन्त्रले भरिभराउ देश नेपालमा चाहिँ मे १ को दिन पनि सार्वजनिक बिदा नदिएर श्रम शोषण गर्ने थुप्रै साहु महाजनहरु भेटिन्छ्न्
By Maheswor Maharjan at October 30, 2016 No comments:
Labels: मजदुर दिवस, मे दिवस, श्रम दिवस
बागमती नदीको एक सुन्दर रुप !!
By Maheswor Maharjan at October 16, 2016 No comments:
Labels: बागमती, संखमुल
सन्ध्याकालीन दरवार मार्ग
By Maheswor Maharjan at August 31, 2016 No comments:
Labels: काठमाडौं, दरवार मार्ग
चिनियाँ सांस्कृतिक सम्बृद्ध बन्दै : नेपालमा विध्वं...